Basola isibhedlela 'ngokubangcwabisa amathambo abangawazi' - Ilanga News
Home Izindaba Basola isibhedlela ‘ngokubangcwabisa amathambo abangawazi’
Owomndeni uthi umalume wabo wanyamalala emuva kokungeniswa eChief Albert
UFUNA kungenelele iziphathimandla zoMnyango wezeMpilo, umndeni wakwaDlamini, eMazizini, eBergville, ngodaba lokunyamalala kwendodana yawo esibhedlela. UMnu Mduduzi Dlamini (37) (osesithombeni), ungeniswe e-Inkosi Albert Luthuli, eThekwini, ngomhla ka-17 kuNhlaba (May), kwathi ngomhla ka-22, batshelwa yisibhedlela ukuthi akaziwa ukuthi ukuphi. Umndeni uthi selokhu anyamalala, akaphindanga watholakala. Kuthe ngeledlule kwatholakala amathambo omuntu emagcekeni esibhedlela, watshelwa ukuthi ngawakhe, ngaphandle kokuthi kwenziwe ulibofuzo.
AbakwaDlamini bathi babona sengathi isibhedlela sibancindezelela ukutheni bangcwabe amathambo atholwe ehlathini elikusona lesi sibhedlela, nabathi sibatshele ukuthi ngakaMnu Dlamini. ILANGA lixoxe noMnu Zamo Dlamini, ongumshana kamufi, othi kabasasithembi isibhedlela, ngoba kasikaze sikhombise ukuba nendaba nokukhathalela uMnu Dlamini ngesikhathi enyamalele. Ngokuthola kweLANGA, uMnu Dlamini, uhlaselwe ngabantu abangaziwa ngakubo ngomhla ka-15 kuNhlaba, bamshiya elimele kakhulu, emuva kokumgenca ngoce-lemba ekhanda.
“Uphuthunyiswe emtholampilo, bafike bamdlulisela esibhedlela e-Ladysmith Rigional. Abakulesi sibhedlela bakhale ngokuthi ulimele kakhulu, kubonakala ngisho ubuchopho ngakhoke bazomdlulisela e-Inkosi Albert Luthuli, lapho ezothola khona odokotela abangongoti, abazomsiza ngokushesha,” kusho uMnu Dlamini. Uthi ube esedluliselwa kulesi sibhedlela, batshelwa ukuthi ngakusasa ngomhla ka-18, uzoya etheatre ayothungwa aphinde amonywe nobomvu osebakhele. “Sihlalile salindela ukuthi uzothi ukululama bese siyafona, sizwe ukuthi usenjani yikhona sizohlela ukuyombona. Simangale ngomhla ka-22, uma sishaya ucingo esibhedlela besitshela izinto eziningi ezingahlangani. Sithole ukuthi bebazi ukuthi unyamalele, kodwa bangasazisa njengomndeni,” kusho uMnu Dlamini.
Uthi batshelwe ukuthi kumakhamera asesibhedlela uyabonakala ephuma ngefasitela, kodwa kusajutswe izinja ukuba zimbheke ehlathini elingaphakathi kusona. “Simangalileke ngomhla ka-10 kwephezulu uma sesitshelwa ukuthi kutholakale amathambo kulona futhi leli hlathi, okwakuthiwa kubheke kulona izinja. Manje sazi ngani noma sebegcina icala nje, basinika amathambo nabo abangazi ukuthi ngakabani?
“Sitshelwe ukuthi ulibofuzo luzokwenziwa kodwa kuzothatha iminyaka emithathu ukuthi kubuye imiphumela kodwa futhi esikuqaphelile wukuthi basijahe ukuthi singcwabe,” kusho yena.
UNkz Nokwandla Zondi, oyisihlobo sikamufi uthi ekuqaleni batshelwa ukuthi sekutholakale amathambo, batshelwa ukuthi yisibhedlela sizothwala izindleko zomngcwabo, kodwa kuleli sonto kushintshile konke lokho. “Basitshele ukuthi bazosisondezela lamathambo, kumele kube yithi esizingcwabelayo,” esho. UMnu Dlamini uthi bamanqika ukungcwaba amathambo abangawazi, futhi okubaxakayo wukuthi batshelwa eyokuthi kuzokwenziwa incwadi efungelwe ukuze uma kuwukuthi bangcwaba umuntu ongeyena uzobe eseyambiwa.
“Yebo singumndeni ohlwempu kodwa ngeke sivume ukuthi kudlalwe ngathi,” esho Okhulumela uMnyango wezeMpilo, uMnuz Ntokozo Maphisa, uthe uMnyango uyalwazi lolu daba futhi abesibhedlela baqala ukuxhumana nabathintekayo kusukela obenyamalele esabhekwa, nangemuva kokutholakala kwamathambo. Uthi, kuhlangenwe nemindeni izikhawu ezintathu, lapho ichazelwe konke ngokwenzekile, nokwenziwayo. UMnyango usikhululile isidumbu ukuba siyofihlwa njengokucela kwemindeni. Uhlelo lokuhlonza ubunikazi bomzimba ngokohlelo loLibofuzo luzoqhubeka.
Previous articleAKAWAFUNI AMAXOKI UMQEQESHI WO-SUTHU
Next articleIsimemezelo ngenqina nehlambo leSilo